Dharka ka gudub guriga. Joogto u noqo taam | Ragga Stylish
Dharka ka gudub guriga
Isboortiga waa jimicsi waxoogaa cabsi ah ama ixtiraam u leh dadka qaarkood inay aad u adag yihiin. Waxay kasbatay caan cajaa'ib leh maadaama ay tahay nooc isboorti oo isku dhafan layliyo iska caabin ah iyo layliyo kale oo xoog si loo wanaajiyo caafimaadka Waxay ku siin kartaa xoogaa cabsi ah maxaa yeelay waa layliyo lagu sameeyo xoog badan. Si ka duwan jimicsiga, meesha aad ku tababbarto iskutallaabtu waa sanduuq. Maaddaama ay jiraan dad aan dooneynin inay had iyo jeer tababar u aado waqti cayiman oo doorbida inay keligood tababaraan, waxay rabaan inay sameeyaan ku dheji guriga.
Qodobkaan waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa jimicsiyo isdaba joog ah oo guriga ka dhaca si, xitaa haddii aadan aadin sanduuqa, aad qaab noqon karto.
1 Dhar iskugeyn ma ku sameyn kartaa guriga?
2 Jahwareerka guriga
3 Dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee guriga
Dhar iskugeyn ma ku sameyn kartaa guriga?
Su'aashan kaliya laguma weydiin isboortiga isweydaarsiga. Xaqiiqdii, munaasabado badan, waxaad maqashay dad doorbidaya inay iibsadaan xoogaa dharbaaxo ama baararka oo ay ku tababaraan guriga. Waa run in, haddii aad ka sameysid guriga oo aad qaab dhismeed wanaagsan ku leedahay leylisyada, waxaad awoodi doontaa inaad hore u mariso horumarkaaga. Si kastaba ha noqotee, tayada iyo jimicsiyada kala duwan iyo mishiinada aad jimicsiga kaga shaqeyn karto ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn.
Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay iskutallaabta. Waa nooc isboorti oo isku dhafan iska caabin iyo jimicsi xoog leh oo xoog leh. Xaaladdan oo kale, caqliga laftiisa ayaa noo horseedaya inaan ka fikirno in tababarka 'Crossfit' ee guriga uusan ahayn habka ugu wanaagsan ee lagu hagaajiyo adkeysiga, tan iyo ma haysan doono agab iyo meel bannaan oo la heli karo.
Sababaha qofku uusan uga mid noqon sanduuqa si uu ugu talagasho waa dhowr. Marka hore, badanaa waa sababta oo ah lacagta ku lugta leh saxeexidda sanduuqa. Waxaa jira dad doonaya inay qaab yeeshaan laakiin Ma haystaan ​​miisaaniyad ku filan oo ay ku bixiyaan sanduuqa. Sidoo kale waa sababta oo ah waxay u tixgeliyaan inay ka qaalisan tahay jimicsiga dhaqameed. Sababta kale ee ugu caansan waa sababta oo ah dad badani ma jecla inay ku tababaraan jadwalo go'an. Sababaha ugu dambeeya waa cimilada darteed. Dadka ka shaqeeya guriga ama nolosha ku mashquulsan, waqti uma hayaan inay sanduuqa aadaan. Si aad u noqotid qaab, waxay weydiistaan ​​dharka isweydaarsiga guriga.
Cayaarahaani waxay bixiyaan faa'iidooyin caafimaad oo fara badan, in kastoo dad badan ay u maleeyaan inay tahay wax iska dhacay. Jawaabta haddii aad iskutallaab ku sameyn kartid guriga waa maya. Waxaad sameyn kartaa wax la mid ah, laakiin ma noqon doonto kala bar sida ugu waxtarka badan.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aadan iskudhaafin karin guriga waa sababta oo ah imisa mashquul ayaa jira. Carqaladda ugu weyn waa telefishanka. Dad badan ayaa aaminsan inay jimicsi sameyn karaan inta ay dhageysanayaan ama daawanayaan barnaamijka galab ee asalka ah. Tani waxay badanaa abuurtaa mashquul ku filan oo aan u oggolaanaynin feejignaanta saxda ah ee jimicsigu u baahan yahay.
Moobaylku waa aalad kale oo ina marin habaabisa. Wicitaanada soo socda, fariimaha WhatsApp, shabakadaha bulshada, iwm Waxay ku socdaan qulqulka. Haddii aad rabto inaad ku tababarto laylisyo xoog badan, ma jiri karaan carqaladeyn deegaankaaga tababarka ah.
Waxaa la mid ah kumbuyuutarka. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ka shaqeeya kombuyuutarka. Haddii aad ku tababarto meel u dhow kumbuyuutarka oo aad dhageysato muusikada, waad joojin doontaa daqiiqad kasta si aad u beddesho heesta. Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli kartaa emayl shaqo oo muhiim ah waxaadna bilaabi kartaa inaad ka soo qayb gasho. Shaqadu waa muhiim, laakiin ma qabsan karto nolosheena oo dhan. Tani dhibaato weyn ayey ku tahay ganacsatada iyo kuwa madaxa bannaan.
In layliyo crossfit ah ee anshaxyada kala duwan lagu sameeyo. Qaarkood waa kuwo culeys qaada oo orda. Haddii aad rabto inaad ku sameyso guriga, waxaad u baahan doontaa wax yar oo dheeraad ah iyo qaboojin. Haddii kale, ma awoodi doontid inaad sameyso.
Waxaa jira ciyaartooy guryahooda wax ku tababarta, laakiin waxay awood u siiyeen booskii hore. Haddii mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ay tahay iyadoo aysan jirin lacag lagu rido sanduuq, waxaan ka shakisanahay in guriga lagu qalabeyn karo.
Tababbarka guriga wuxuu u baahan yahay xoog xoog badan. Tani waxay sababtaa dad yar oo u heellan inay sidaas sameeyaan.
Dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee guriga
Haddii aad runtii diyaar u tahay inaad ku dhejiso dharka guriga, waxay umuuqataa fikrad weyn, laakiin waxaan rajeynayaa inaad la jaanqaadi karto. Way kafiican tahay in tababar la sameeyo xitaa haddii guriga lagu waafajiyo halkii aan waxba laga qaban lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa, markasta oo aad awoodid, tag sanduuqa si aad u tababarto maxaa yeelay farqiga u dhexeeya ayaa aad u xun
Waxaa jira fursado yar oo noo ogolaanaya inaan ku qaban karno iskutallaabta guriga, laakiin waxaan dooneynaa inaan ka faa'iideysanno kuwa jira. Aqlabiyaddu waxay noqon doontaa inaad ku jimicsato miisaanka jidhkaaga. Waa mid ka mid ah hubka loogu jecel yahay in lagu tababaro xoog iyo raaxo sarre leh.
Tani waa liiska jimicsiyada aad ku sameyn karto guriga:
Jiisooyin bilaash ah, ama miisaan leh haddii aad hesho laba dumbbells
Tallaabooyin bilaash ah ama miisaan leh
La soco fuulayaasha
Ku cadaadinaya haddii aad xoogaa miisaan leedahay
Kettkelbell lulid haddii aad hesho kettlebell
Ma jiraan wax yar oo ay tahay inaad sameyso iyada oo aan la helin nooc qalab ah, laakiin waxaa ka sii xun inaad waxba qaban weydo. Haddii aad rabto inaad awood yeelato, sidoo kale waxaad sameyn kartaa leylis faraq ah oo ah nooca Hata-ga ah. Tabata waa nooc jimicsi soconaya waqti aad u yar (inta udhaxeysa 7 ilaa 15 daqiiqo) kaas oo jimicsiyada lagu sameeyo waqtiyo udhaxeeya 20 ilbidhiqsi iyo 10 sekan oo nasasho ah
Habka ugufiican ee lagu hormarin karo waa in lagu sameeyo wareega jimicsiga waqtiga ugu yar ee suuragalka ah lana hagaajiyo astaamaha. Waxaa muhiim ah in mudnaanta la siiyo farsamooyinka leyliska iyadoo la adeegsanayo xawaaraha fulinta. Aan waxtar lahayn Samee fadhiisooyin badan haddii aanan si sax ah u qabanayn oo aan dhaawacno jilibka.
Sidaad u aragto, xaddidaadaha is-dhaafsiga ee guriga waa kuwo aad u sarreeya maadaama ay yihiin layliyo u baahan tas-hiilaadyo iyo tababare ku haggaaya inaad sameyso layliyada oo kaa caawiya inaad iska ilaaliso dhaawacyada suurtagalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Dharka ka gudub guriga